Golaha deegaanka ee Boosaaso oo xasaanadii shaqo ka joojiyay xubin ay ku eedeeyeen inuu ka qaybgalay shirar ka dhan Puntland. – Radio Daljir
Bosaso. Apr 26 -Xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ayaa maanta kulan ku yeeshay dowladda hoose ee magaalada Boosaaso.
Kulanka oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Boosaaso Xasan Cabdale Xasan ayaa waxaa golaha lagu soo bandhigay qoraal xilka ka qaadis iyo shaqo joojin ah oo lagu sameeyey xildhibaan Yaasiin Cabdisalaan Yuusuf.
Xildhibaanka ayaa lagu soo eedeeyey inuu jabiyay qodobka 8.7 ee xeer hoosaadka golayaasha deegaanka ee Puntland oo mamnuucaysa in laga qaybgalo shirar ka dhan Puntland, xildhibaan Yaasiin Cabdisalaan Yuusuf ayaa lagu soo eedeeyey inuu uga qaybgalay magaalada Nairobi ee xarunta Kenya shir ay abaabuleen maamulka Casayrland oo uu ku dhawaaqay siyaasi horay xukuumadda Puntland xilal uga soo qabtay.
Golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ayaa si aqlabiyad ah isku raacay in xasaanadii shaqo laga qaado xildhibaan Yaasiin Cabdisalaan Yuusuf.
Gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa Bosaaso Xasan Cabdale Xasan ayaa gabagabadii kulanka ugu baaqay beesha uu kasoo jeedo xildhibaanka xasaanada laga qaaday inay keenaan qofkii buuxin lahaa.
Xidhibaan Yaasiin Cabdisalaan Yuusuf oo dalka Kenya kumaqan ayaan weli ka hadlin xilka qaadista golaha deegaanka ee Boosaaso ay ku sameeyeen.